Remove WAT ဆိုတဲ့ software လေးပါ ~ မျိုးကို
Remove WAT ဆိုတဲ့ software လေးပါ
19:19 Software No comments
Windows က geniue ဖြစ်သွားရင် ဒီလိုလေးတွေ ပေါ်တယ်လေ... Desktop Background မှာပုံထည့်ရင် ခဏကြာတာနဲ့ အမဲရောင်ကြီး ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အရင်က ကျွန်တော်စက် မှာ ဒီလိုဖြစ်တော့ ဒီ Software လေးကို သုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အခု Windows XP သုံးနေရတော့ ဒီ Software သုံးရတော့ ဒေါင်းပြီး သုံးကြည့်တာ အဆင်မပြေတော့ဘူး ... ဒါနဲ့ လိုင်းပေါ် ရှာကြည့်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
Windows XP သုံးနေသော သူငယ်ချင်းများ ဒီနေရာလေးမှာ ဝင်ဒေါင်းလိုက်ပါ။ Windows7သုံးနေသော သူများအတွက် အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ လိုချင်ရင် ယူလိုက်ပေါ့။ ဒီပိုစ့်လေးက ကျွန်တော့်ဆရာ ရေးတင်ထားတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ ကျွန်တော်က ပြန်ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဂျာ ... အောက်က ပုံလေးက VISTA
အောက်က ပုံလေးက Window 7
Remove WAT ဆိုတဲ့ software လေးကိုသုံးရင် Windows Activation ကို remove လုပ်ပေးတယ်လို့ သိထားရတယ် ... အဲလိုလုပ်ရင် windows က geniue မပေါ်တော့သလို windows လည်း ပြန်သုံးလို့ ရတယ်လို့ စမ်းကြည့်ဖူးတယ် ... ဘာဆိုးကျိုးရှိလည်း တော့မသိဘူးဗျ ... စမ်းကြည့်ရအောင်
VERSION က WORKS ON ALL EDITIONS OF 7/R2
This isalittle tool I put together to remove WAT, with help from various others, (Windows Activation Technologies) completely from the OS, whilst still retaining genuine status and receiving all updates (optional aswell). You can also pass the genuine check in things like Windows Defender.
Download : In theory this should havea100% success rate on all machines.
/s switch is for silent mode ...